Budata lit it APK maka Android
Budata lit it
Budata lit it,
udo ya egwuregwu bụ egwuregwu ịme anwansị nke ị nwere ike igwu na ngwaọrụ gị yana sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Kwesịrị ime bọlbụ ahụ. Gbalịa ịrụ ọrụ a dị mkpa e nyere gị. Zipu oku ma ghaku ocha ato. Ihe dị mkpa bụ ịtọlite ​​usoro ziri ezi ma gbaa ha niile ọkụ notu oge.
Akụkụ ị mepụtara dị ezigbo mkpa. Enweghị nsogbu mgbe edoziri ịmetụ bọlbụ niile. Ma ọ bụrụ na ị mụnye otu ma ọ bụ abụọ obere, kpakpando gị ga-ebelata. Ọ bụrụ n ịchọrọ ịnakọta karịa kpakpando ị ga - emerịrị ya kacha mma.
Ekwenyesiri m ike na ị ga-enwe ọ ofụ dị ukwuu na ahụmịhe a pụrụ iche. Nwere ike ịhụ ihe ị na-ahụtabeghị mbụ. Youll ga-amụta ya mgbe isi ole na ole gachara. Ndị na-egwu egwuregwu na-enwe ekele dị ukwuu maka ya na egwuregwu ya bara uru na ọhụụ na-enweghị nsọtụ. Ọbụna ọ na-aghọ egwuregwu ị na-achọghị ịhapụ. Ọ bụrụ nịchọrọ ịbụ akụkụ nke egwuregwu a, ị nwere ike ibudata egwuregwu ahụ nefu na ekwentị mkpanaaka gị.
lit it Ụdịdị